Impilo Yengqondo | Isilimela 2022
Iindlela ezingama-40 zokufumana uxolo lwengqondo kunye nokuzola kwangaphakathi
Ngaba uzifumanisa ungalunganga kwaye iingcinga zakho zikhohlakele? Ukufumana uxolo lwengqondo kufuna umgudu kunye nokwazisa. Nazi iindlela ezingama-40 zokufumana uxolo lwengqondo kunye nokufezekisa ukuzola kwangaphakathi.
Uzahlula njani iiMvakalelo zezeMpilo yeNgqondo
Ngaba uziva ngathi iimvakalelo zakho zikongamela wena? Funda ngamanyathelo afunekayo ukuze uhlukanise iimvakalelo kwaye uphinde ulawule iingcinga zakho.
Ufunda njani ukuba nomonde ukuze ufumane iingcinga kunye neemvakalelo zakho
Umonde ungaphezulu kwesidima; yimfuneko yobomi obuzalisekileyo. Funda eli nqaku ukwazi ukuba ungafunda njani ukuba nomonde kumanyathelo ama-5 alula.
Iindlela ezili-15 zokuyekisa ukuZicingela nokuzikhathaza ngayo yonke into
Uzibuza ukuba ungayeka njani ukucinga ngaphezulu kuyo yonke into? Ngokusebenzisa la manyathelo alula, emihla ngemihla ukoyisa ukukhathazeka, ukutyeba, kunye nokucinga kakhulu, sinokulufumana uxolo kunye nokuzola kubomi bethu bemihla ngemihla.
Iimpawu ze-4 Utsaliwe ngokweemvakalelo (Kwaye kufuneka wenze ntoni)
Ukuziva ukhathazekile ngokweemvakalelo kuyimveliso yolunye uhlobo lokungalungelelani kubomi bethu bemihla ngemihla. Ukufumana oyena nobangela wokudinwa ngokweemvakalelo kubalulekile kwimpilo yethu iphela.
Uyicoca njani ingqondo yakho kwaye ubekhona ngoku nangoko
Sonke sixakekile sinemisebenzi kunye neentsapho. Ngazo zonke izinto ekufuneka sizicingile, Nazi izinto onokuzenza ukuze ufunde ukucoca ingqondo yakho.
Iindlela ezingama-30 zokuzinyanga Nokuba ungathini
Ukuba uziva uphantsi kwaye udimazekile, lixesha lokuba uzinyange ukuze uphinde ubenakho ukukhuthazeka kunye nothando olufunayo. Sonke kufuneka sizinyange ngamanye amaxesha. Nazi iindlela ezingama-30 zokuba nobubele kuwe.
Iindlela ezili-15 ezilula (kwaye eziSebenzayo) zoLuhlu loxinzelelo
Akululanga ukoyisa ukudakumba noxinzelelo. Nantsi indlela yokuyeka ukuba lusizi kunye nokunciphisa iimpawu zoxinzelelo kwaye woyise uxinzelelo.
Ukucamngca kwasekuseni okuKhokelwayo kwabaQalayo (Oko kuyakutshintsha usuku lwakho)
Ukuba ufumana umxholo opheleleyo wokucamngca, okanye uziva ufuna ixesha elininzi lokuziqhelanisa nokucamngca kwasekuseni, eli nqaku liza kukunceda.
Indlela Yokukhulula Umsindo Ngaphandle Kokwenzakalisa Abanye
Ukungalawuleki komsindo kubangela iingxaki ezinkulu ebomini bakho. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba ufunde ukukhupha umsindo ngokufanelekileyo. Nanga amanyathelo amane okwakha ubudlelwane obunempilo kunye nomsindo.
Kutheni Ndinemvakalelo Kangaka? Izizathu ezi-9 ezifihliweyo
'Kutheni ndivakalelwa kangaka nje?' usenokubuza. Ayisiyonto imbi leyo. Umntu onemvakalelo uziva yonke into. Lo mntu unxibelelana nobomi kunye nabantu kumanqanaba anzulu engqondweni, emzimbeni nasemphefumlweni.
Kutheni le nto ndiziva ndidandathekile Qho ngeXesha kungekho sizathu?
Kutheni ndiziva ndidandathekile? Uninzi lwethu ludandatheka ngamanye amaxesha ngaphandle kwesizathu. Nazi izizathu eziqhelekileyo, kunye neengcebiso zeengcali zokukubuyisela kulonwabo kunye nokuhlala apho.
Izakhono ezili-10 zoLawulo lweMvakalelo zeNgqondo eseMpilo
Ukuphila ubomi ngokuzeleyo kufuneka ube u-agile ngokweemvakalelo. Zizo ezi zakhono zolawulo lweemvakalelo ezili-10 eziza kukunceda ukuba uphile ubomi obuthandayo.
Iindidi ezili-17 zokuCamngca (ubuchule kunye neziseko) ukuze uziqhelanise nengqondo
Nokuba yeyiphi na indlela yokucamngca oyikhethayo, ukuziqhelanisa nokuphindaphinda kuya kukuhambisa kufutshane nenkululeko, ingqondo kunye nokukhanyiselwa.
Iindlela ezi-5 zokuThoba iNqondo yakho kwaye uhlale ukhona
Wonke umntu ufuna ukuphila ubomi obulungileyo. Ungabuphucula ubomi bakho ngokufunda indlela yokuthula ingqondo yakho kwaye uhlale ubekhona usebenzisa ezi ndlela zisi-5.
Ungakuziqhelanisa njani nokucamngca okuhle ngeManyathelo ama-2 alula
Ngaba ucinga ukuba ukucamngca okuhle kunokukunceda ukuba ucinge ngakumbi, kwaye ekugqibeleni kuncede usondele kubomi bakho bamaphupha? Nantsi indlela yokuziqhelanisa nokucamngca okuhle ngamanyathelo ama-2 alula.
Ngaba Unokophuka ngokweemvakalelo? Iindlela ezili-15 zokuPhinda uzenzele iZiko lakho
Ukubonisa iimpawu zokophuka ngokweemvakalelo? Ezi zilungiso zikhawulezayo zili-15 ziya kukunyusa kwaye zibaleke ngaphandle kwexesha kwaye zikwenze uphume womelele ekugqibeleni.
Kutheni Ndixinezeleke Ngoku? Izinto ezi-4 ezikudida ngokufihlakeleyo
Kutheni ndidandatheke kangaka? Ngamanye amaxesha abantu baziva bedandathekile bengazi ukuba kutheni. Ke ngoko siye sahamba kwizinto ezi-4 ezinokubangela ukuba abantu badandatheke ngokufihlakeleyo.
Ixhala alikho malunga nokukhathazeka kakhulu, kodwa ukukhathalela kakhulu
Sukulushukumisa ukuxhalaba kwakho njengesiqhelo ukukhathazeka. Kungaphezulu lee kunoko kwaye kunokubangela umonakalo omkhulu kuwe ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni.
Ukucamngca ngeziBonelelo eziya Kukuphumelela
Ukucamngca ngezibonelelo kunokuphucula yonke indawo yobomi bakho kunye nokunyusa impumelelo kunye nolonwabo. Funda ngendlela onokuzuza ngayo kwaye uqalise namhlanje.